भ्यालेन्टाइन्स र केपी–पीके - परिहास - नेपाल
भ्यालेन्टाइन्स र केपी–पीके
भ्यालेन्टाइन्स डे आउँदैछ । मन परेका व्यक्तिको मायाको डोरी झनै कसिलो बनाउन धेरैले मीठामीठा योजना बनाउँछन् नै । कतिपयले बनाइरहेकै होलान् । तर, केही महिनादेखि एउटा भीआईपी ‘लभर’ जोडी भने तनावमा छ । गहिरो ‘लभ’मा डुबेका केपी–पीकेको जोडी प्रेमको चरमोत्कर्ष सत्तामा सँगै हात समाएर जाने र एकआपसमा विलीन हुने सपना देखिरहेको थियो । सम्भवत: उनीहरु भ्यालेन्टाइन्स डेलाई यो अवसर बनाउने योजनामा थिए । तर, एकाएक छिमेकबाट पाहुना आएपछि यो जोडीको प्रेममा तुषारापात हुन थाल्यो ।
लुकुवा बाजेलाई भने केपी–पीकेको सम्बन्धमै शंका लाग्यो । आफ्नै घर–आँगन, माटोको सुगन्धमा फलेफुलेको प्रेम हो भने पराइले आँखा झिम्काउँदैमा लर्‍याकलुरुक किन हुने ? यो प्रेम पनि आयातीत थियो कि कमरेडहरु ?
गुट चिन्ने उपाय